देउवाको दूत बनेर कानून मन्त्री कार्की फेरि पुगे बालकोट, ओलीले यस्तो जवाफ दिएर पठाए ! - Nepalese Times
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 17 मिनेट अघि
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 58 मिनेट अघि
देउवाको दूत बनेर कानून मन्त्री कार्की फेरि पुगे बालकोट, ओलीले यस्तो जवाफ दिएर पठाए !
नेप्लिज संवाददाता १२ आश्विन २०७८, मंगलवार १३:३६ (3 हप्ता अघि) १५१ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूतका रुपमा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की मंगलवार विहान बालकोट पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दुतको रुपमा मन्त्री कार्कीलाई पठाएका हुन् ।
ओलीले देउवालाई कानुनमन्त्रीमार्फत सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानूनी भएको सन्देश पठाएका हुन् ।
त्यस्तै उनले देउवाको यस्तो कामले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध नराम्रो हुने भन्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न देउवाको दूतका रुपमा मन्त्री कार्की बालकोट पुगेको यो तेस्रोपटक हो ।
देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश हिजो सोमबार खारेज गरेका थिए ।
यस्‍तो छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उनीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशः